Svondo 6 Kurume 2022
Tii Serenity inogadziriswa yemazuva ano tii inogadzira inofadza yekushandisa-ruzivo. Iyo purojekiti inonyanya kutarisa nezvekunakisa zvinhu uye ruzivo rwevashandisi sezvo chinangwa chikuru chinoratidza chigadzirwa kuve chakasiyana nezvigadzirwa zviripo. Doko retiii rakaderera pane muviri iro rinobvumira chigadzirwa kutarisa pamusoro pevhu chinounza hunhu hwakasiyana. Yakakombama zvishoma yakakomberedzwa muviri pamwe neakakomberedzwa kumeso inotsigirawo iyo yakasarudzika kuzivikanwa kwechigadzirwa.
Mugovera 5 Kurume 2022
Chandelier Iyo Lory Duck yakagadzirirwa sisitimu yekumisa inounganidzwa kubva mumamodhi akagadzirwa nendarira uye epoxy girazi, rimwe nerimwe rakafanana neke dhiri inotsvedza pasina simba kuburikidza nemvura inotonhorera. Iwo ma module anopawo kurongeka; nokubata, imwe neimwe inogona kuchinjika kutarisana nechero mirayiridzo uye kusungirirwa pakukwirira chero kupi. Chimiro chemarambi chakazvarwa nekukurumidza. Nekudaro, zvaida mwedzi yekutsvagiridzwa uye kusimudzira pamwe nehuwandu husingaverengeke prototypes kuti igadzire mwero wayo wakanaka uye kutaridzika kwakanaka kubva kune ese angles angles.
Chishanu 4 Kurume 2022
Light Portal Remangwana Rukova Guta
China 3 Kurume 2022
Light Portal Remangwana Rukova Guta Chiedza Portal ndiyo masterplan yeYibin Highspeed Rail City. Iyo shanduko yemararamiro inokurudzira kune ese mazera gore rose. Inoteverana neYibin High Speed Rail Station iyo yakashanda kubva munaJune 2019, Yibin Greenland Center inoumbwa ne-160m murefu wakasanganiswa-shandisa Twin Towers inobatanidza kuvaka uye zvisikwa neye 1km yakareba landou boulevard. Yibin ine nhoroondo kweanopfuura makore zviuru zvina, anounganidza huchenjeri uye tsika zvakangoita sedare murwizi airatidza kukura kweYibin. Iwo maTwin Towers anoshanda sechiedza portal kutungamira vashanyi pamwe nechiratidzo chekuti vagari vaungane.
Chitatu 2 Kurume 2022
Mazino Kiriniki Clinique ii ikiriniki yakasarudzika kiriniki yemutungamiriri wemafungiro uye anovhenekera ari kushandisa nekutsvagisa hunyanzvi hwekutanga uye zvigadzirwa mukuraira kwake. Vagadziri vaiona yakaisirwa pfungwa yakavakirwa pane orthodontic chaiyo yekushandisa yakanyanya chaiyo yezvokurapa zvishandiso senge maitiro ekugadzira munzvimbo yese. Mukati madziro mafenicha uye fenicha zvinosanganisika zvisina tsvina mukati meganda jena neparutivi rweyero koriori uko yekucheka yekurapa tekinoroji inoiswa.
Chipiri 1 Kurume 2022
Megalopolis X Shenzhen Super Headquarter Megalopolis X ichava muzinda mutsva mumoyo wechikuru bay nzvimbo, padyo nemuganho pakati peHong Kong neShenzhen. Urongwa hwehumhizha hunobatanidza kuvaka pamwe nevekufamba netsoka, mapaki nenzvimbo dzeruzhinji. Pamusoro uye pazasi pevhu mafambiro ekutakura ari kurongwa nekukudza kubatanidzira muguta. Iyo yepasi pevhu inogadzirisa zvigadzirwa network inopa hurongwa hwekutonhora kwedunhu uye zvinongoitisa marara kurapwa nenzira isina musara. Icho chinangwa ndechekugadzira iyo yekugadziridza master plan dhizaini yemagadzirirwo achaitwa maguta mune ramangwana.
Paths of Light Dvd Bhokisi Chipiri 28 Chikumi
Haezer Album Chivharo Art Muvhuro 27 Chikumi
Up Imba Yekugezera Svondo 26 Chikumi
Tii Chandelier Womenswear Muunganidzi Light Portal Remangwana Rukova Guta Mazino Kiriniki Megalopolis X Shenzhen Super Headquarter